အပူငွိမျးဖို့အတှကျ ရခြေိုးနညျးနှငျ့ ခေါငျးလြှျောနညျး – Youth Bar
အပူငွိမျးဖို့အတှကျ ရခြေိုးနညျးနှငျ့ ခေါငျးလြှျောနညျး
ရမေခြိုးခငျ ရကေို ပါးစပျထဲမှာ ငုံမယျ။ ပွနျထှေး ထုတျမယျ။ ဘာတှေ ပါသှားမယျထငျလဲ။ အပူတှပေါသှားမယျ။
ပွီးရငျ လကျခုပျထဲမှာ ရလေေး ထညျ့မယျ။ မကျြလုံးလေးကို အဲဒီလကျခုပျထဲမှာ ကငျြးပေးမယျ။ မှိတျလိုကျ ဖှငျ့လိုကျပေါ့။ မကျြလုံးထဲက အပူတှေ ပါသှားမယျ။
အပူတှရေော၊ အညဈအကွေး ဖုနျတှရေော ပါသှားမှာပေါ့နျော။
သခြောခံစားကွညျ့ရငျ ရကေို ငုံပွီးတော့ ကိုယျ့ရဲ့လကျမောငျးတဈနရော ပွနျထှေးကွညျ့လိုကျ။ နညျးနညျးလေး ပူတယျ။ အဲဒါက ဘယျကပါလာတာလဲ… ခံတှငျးထဲက။
ဒါဆိုရငျ ဒီလိုလေး လုပျတာနဲ့ကို ဒျေါထှေးကွညျရဲ့ ငယျထိပျ မခံမရပျနိုငျအောငျ ပူတယျဆိုတာ ပိုဆိုးသှားစရာ အကွောငျးရှိလား။ မုခြ သကျသာသှားနိုငျသလား။
သကျသာသှားမှာပါ။ သာမနျ သကျသာသှားမှာလား။ မုခြ သကျသာသှားမှာလား၊ မုခြ သကျသာသှားမှာပါ။ အကုနျအကမြားလား။ မမြားပါဘူးနျော။
အဲဒါလေးကို ပွီးပွီဆိုတော့မှ လကျခုပျထဲ ရလေေးထညျ့ပွီး နှာခေါငျးလေးထဲကို အသာလေးမော့ပွီး ထညျ့လိုကျ။နှာသီးဆိုတာ နှာခေါငျးရဲ့ သုံးပုံနှဈပုံလောကျမှာ ရှိတယျ။
ဆိတျခှာ ပုံသဏ်ဌာနျ ရှိတယျ။ အဲဒါလေး ထိပွီဆို မှနျထူသှားတာပဲ။ ပူနတောကိုး။ ပူနတေဲ့ အိုးတဈအိုးကို ရနှေငျ့ ပတျကွညျ့။
ရှဲခနဲဆို ပူသှားတယျ။ ရလေေးသှငျး၊ တဈခါ ပွနျညှဈထုတျ (၅)ကွိမျစီလောကျ၊ ပါးစပျကလညျး ငုံမယျ။ နှာခေါငျးကိုလညျး ရလေေးထညျ့မယျ့။
မကျြစိကိုလညျး ရနေဲ့ ပုတျခတျ၊ ပုတျခတျ လုပျမယျ။ ပွီးရငျ နားထဲတော့ ရသှေားမထညျ့နဲ့နျော။ နားထဲမှာ နားအုံ ရှိတယျ။
နားအုံကို ရလေေးနှငျ့ နညျးနညျးဆှတျပေးမယျ။ အဲသလို လုပျခွငျးအားဖွငျ့ အပူတှေ လြော့နပွေီ။
ဒါတှပွေီးလို့ ခန်ဓာကိုယျကို ရလေောငျးတော့မယျဆိုလညျး အရမျးမလောငျးလိုကျပါနဲ့။ စနဈတကြ ဘယျခွထေောကျကို ရအေရငျလောငျးကွညျ့ပါ။ ပွီးရငျ ညာဘကျလကျကို လောငျးပါ။
ဘယျခွညောလကျ လောငျးတာကလညျးပဲ နောငျအခှငျ့သာရငျ အကယျြပွောမယျနျော။ လောငျးတာခငျြးအတူတူ အဲသလို လောငျးကွညျ့ရငျ အပူ သိသိသာသာ လြော့စပေါတယျ။
ဥပမာ- အပူခြိနျ ( ၁၀၃ – ၁၀၄ ) လောကျဖွဈလို့ တကျတော့မယျ့ကလေးလညျး ဘာမှ မလုပျနှငျ့။ သနပျခါးရကြေဲကြဲလေးကိုသာ ဘယျခွေ၊ ညာလကျ နှဈကြော့လောကျ လိမျးကွညျ့လိုကျ။ အလိုလို အပူခြိနျက ငွိမျပွီး ကလြာမယျ။
သှေးသိပျတိုးနတေဲ့သူ ဘာဆေးမှ မသောကျနဲ့။ ဘယျခွေ၊ ညာလကျကို ရလေေးလောငျးပွီးတော့ သနပျခါးသာ လိမျးကွညျ့လိုကျ။ ပွနျပွီး တိုငျးကွညျ့လိုကျပါ။
ဒါက ဆရာကွီးတို့ စာအတှကွေုံ့ရော၊ ဘဝအတှကွေုံ့ရော၊ ကုထုံးအတှအေ့ကွုံရော ပေါငျးစပျပွောနတောလို့ တလေးတနကျ ဒျေါထှေးကွညျ နားလညျစခေငျြတယျနျော။
အခုက ဘာအကွောငျးပွောနလေဲဆို ရအေသုံးအကွောငျး ပွောနတောနျော။ သူ့ရဲ့ အပူတှေ ငွိမျးဖို့အတှကျပါ။
ပွီးတော့မှ ဖွညျးဖွညျးလေးခငျြး လကျဖြား၊ တံတောငျဆဈ၊ လကျမောငျး၊ ခွအေစှနျ၊ တံတောငျဆဈ အဲသလိုအေးအေး ဆေးဆေးနဲ့ ရလေောငျးပွီး ခြိုးပေးလို့ရှိရငျ ဒျေါထှေးကွညျရဲ့ ကနျြးမာရေးဟာ ရမှေ တဈပါး ဆေးမရှိပါဘူးလို့ အဲဒီအပူကို လြော့ခငျြပါတယျဆိုရငျ မေးခှနျးတဈခု လှမျးမေးကွညျ့ခငျြတယျ။
ငယျငယျက ငရုတျသီးထောငျးလို့ မကျြစိထဲ ဝငျသှားရငျ အမေ (သို့ ) အဒျေါရေ . . . သား/သမီး တော့ မကျြစိထဲ ငရုတျသီးဝငျသှားပွီဆိုရငျ အမတေို့၊ အဒျေါတို့ ဘယျကို ရလေောငျးခိုငျးလဲ။ ခွမေကို ရလေောငျးခိုငျးတယျ။ သိပျကို အဓိပ်ပာယျရှိတယျ။
အပူရဲ့သဘာဝက လြှောကျသှားတယျ၊ စီးသှားတယျ၊ ဟတျသှားတယျ။ အခွခေံ ရူပဗဒေသိပ်ပံဘာသာအရ အပူတှဟော တဈနရောကနေ တဈနရောကို လြှောကျတယျ၊ စီးတယျ၊ ဟတျတယျပေါ့။
ဥပမာ – မီးပုံရှိတယျ။ ခမျးလှမျးလှမျးမှာ ထိုငျနရေငျတောငျ လာဟတျနတော။ ရနှေေးအိုးတဈအိုး မီးပူပေးထားရငျ တညျစက ရကေို လကျညှိးလေးထောကျကွညျ့။ လုံးဝ မပူဘူး။ တျောတျောကွာရငျ ရကေ အပူစီးလာတယျ။
ဟိုး . .. ခပျလှမျးလှမျးမှာ ဆယျပလေောကျသံခြောငျးကွီး အဖြားတဈဖကျကို မီးပုံထဲ ထညျ့ထားမယျ။ ကွာရငျ အပူကဘယျရောကျလာလဲ။ ဒီဘကျထိပျအထိ စီးလာတယျ။ အပူစီးလာတာ။ အပူ လြှောကျလာတာ။
ကိုယျ့မှာ အရိုးတှေ ရှိတယျ။ သှေးတှေ အသားတှေ ရှိတယျ။ အရိုးတှထေဲ အပူလြှောကျလာမယျ။ သှေးတှေ သားတှထေဲ အပူစီးလာမယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ခွထေောကျကို ရလေောငျးလိုကျရငျ အပျေါကပူတာ သကျသာမယျ။
ဒါအပူတှေ အောကျကို ဆငျးတာ။ မေးခှနျးလေးက မခံမရပျနိုငျအောငျ ပူနတောဆိုတော့ အဲဒီအပူတှေ အောကျကို တဈခကျြလှညျ့ပေးရမှာပေါ့နျော။
ရခြေိုးတာနှငျ့ ခေါငျးလြှျောတာအပျေါမှာ တဈခုသတိထားရပါမယျ။ ခေါငျးလြှျောပွီးမှ ဘယျတော့မှ ရမေခြိုးပါနှငျ့။ ရခြေိုးပွီးမှ ခေါငျးလြှျောပါ။
နောကျတဈခုက ရခြေိုးခါနီးလေးမှာ ခွဖေဝါးကို ဆားပှတျပွီးမှ ရခြေိုးပါလို့ ပွောခငျြပါတယျ။ ဆားက ဘာလဲဆို အပူစုပျတယျ။
ရခေဲမုနျ့လုပျတဲ့သူတှဆေိုရငျ အပွငျမှာ ဆလငျဒါကွီးတဈခု ရခေဲတှေ။ အတှငျး ဆလငျဒါကွီးတဈခုထဲမှာတော့ ရခေဲမုနျ့တှပေေါ့။
ဆလငျဒါဆိုတာ အိုးကွီးနှဈခုပေါ့။ အတှငျးဆလငျဒါကို ကလိကလှညျ့နှငျ့ လှညျ့ပေးတဲ့အခါ စလငျဒါနှဈခုကွားက ရခေဲတှေ ခကျြခငျြးပြျောတာပေါ့။
ပူတာကိုး။ အဲဒီတော့ အဲဒီအပူကို စုပျနိုငျမှ ရခေဲခကျြခငျြး မပြျောမှာမို့ ရခေဲပျေါ ဆားလေးတငျလိုကျတယျ။ ရခေဲပျေါ ဆားတငျလိုကျရငျ မပြျောတော့ဘူး။ ထှကျသမြှအပူ ဆားကစုပျယူတာကိုး။
ရကေို တဈနကေို့ သာမနျဖနျခှကျ ( ၅ ) ခှကျကနေ ( ၇ )ခှကျလောကျထိ သောကျမယျ။ ရကေို စနဈတကြ ခြိုးမယျ။
ရကေို ငုံမယျဆိုရငျ အပူအကွောငျးခံပွီးဖွဈနတေဲ့ရောဂါတှေ ပိနျးကွာရှကျတှငျ ရမေတငျသကဲ့သို့ ပြောကျမှာပါလို့ပွောကွားရငျး နိဂုံးခြုပျပါတယျ။
အစာဝ၊ အနာကငျး၊ ဘယာရှငျး – ကွပါစေ။Credit-ဆရာကွီးဦးရနျအောငျ
ရေမချိုးခင် ရေကို ပါးစပ်ထဲမှာ ငုံမယ်။ ပြန်ထွေး ထုတ်မယ်။ ဘာတွေ ပါသွားမယ်ထင်လဲ။ အပူတွေပါသွားမယ်။
ပြီးရင် လက်ခုပ်ထဲမှာ ရေလေး ထည့်မယ်။ မျက်လုံးလေးကို အဲဒီလက်ခုပ်ထဲမှာ ကျင်းပေးမယ်။ မှိတ်လိုက် ဖွင့်လိုက်ပေါ့။ မျက်လုံးထဲက အပူတွေ ပါသွားမယ်။
အပူတွေရော၊ အညစ်အကြေး ဖုန်တွေရော ပါသွားမှာပေါ့နော်။
သေချာခံစားကြည့်ရင် ရေကို ငုံပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့လက်မောင်းတစ်နေရာ ပြန်ထွေးကြည့်လိုက်။ နည်းနည်းလေး ပူတယ်။ အဲဒါက ဘယ်ကပါလာတာလဲ ခံတွင်းထဲက။
ဒါဆိုရင် ဒီလိုလေး လုပ်တာနဲ့ကို ဒေါ်ထွေးကြည်ရဲ့ ငယ်ထိပ် မခံမရပ်နိုင်အောင် ပူတယ်ဆိုတာ ပိုဆိုးသွားစရာ အကြောင်းရှိလား။
မုချ သက်သာသွားနိုင်သလား။ သက်သာသွားမှာပါ။ သာမန် သက်သာသွားမှာလား။ မုချ သက်သာသွားမှာလား၊ မုချ သက်သာသွားမှာပါ။ အကုန်အကျများလား။ မများပါဘူးနော်။
အဲဒါလေးကို ပြီးပြီဆိုတော့မှ လက်ခုပ်ထဲ ရေလေးထည့်ပြီး နှာခေါင်းလေးထဲကို အသာလေးမော့ပြီး ထည့်လိုက်။နှာသီးဆိုတာ နှာခေါင်းရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်မှာ ရှိတယ်။
ဆိတ်ခွာ ပုံသဏ္ဌာန် ရှိတယ်။ အဲဒါလေး ထိပြီဆို မွှန်ထူသွားတာပဲ။ ပူနေတာကိုး။ ပူနေတဲ့ အိုးတစ်အိုးကို ရေနှင့် ပတ်ကြည့်။
ရှဲခနဲဆို ပူသွားတယ်။ ရေလေးသွင်း၊ တစ်ခါ ပြန်ညှစ်ထုတ် (၅)ကြိမ်စီလောက်၊ ပါးစပ်ကလည်း ငုံမယ်။ နှာခေါင်းကိုလည်း ရေလေးထည့်မယ့်။
မျက်စိကိုလည်း ရေနဲ့ ပုတ်ခတ်၊ ပုတ်ခတ် လုပ်မယ်။ ပြီးရင် နားထဲတော့ ရေသွားမထည့်နဲ့နော်။ နားထဲမှာ နားအုံ ရှိတယ်။ နားအုံကို ရေလေးနှင့် နည်းနည်းဆွတ်ပေးမယ်။ အဲသလို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် အပူတွေ လျော့နေပြီ။
ဒါတွေပြီးလို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေလောင်းတော့မယ်ဆိုလည်း အရမ်းမလောင်းလိုက်ပါနဲ့။ စနစ်တကျ ဘယ်ခြေထောက်ကို ရေအရင်လောင်းကြည့်ပါ။
ပြီးရင် ညာဘက်လက်ကို လောင်းပါ။ ဘယ်ခြေညာလက် လောင်းတာကလည်းပဲ နောင်အခွင့်သာရင် အကျယ်ပြောမယ်နော်။ လောင်းတာချင်းအတူတူ အဲသလို လောင်းကြည့်ရင် အပူ သိသိသာသာ လျော့စေပါတယ်။
ဥပမာ- အပူချိန် ( ၁၀၃ ၁၀၄ ) လောက်ဖြစ်လို့ တက်တော့မယ့်ကလေးလည်း ဘာမှ မလုပ်နှင့်။ သနပ်ခါးရေကျဲကျဲလေးကိုသာ ဘယ်ခြေ၊ ညာလက် နှစ်ကျော့လောက် လိမ်းကြည့်လိုက်။ အလိုလို အပူချိန်က ငြိမ်ပြီး ကျလာမယ်။
သွေးသိပ်တိုးနေတဲ့သူ ဘာဆေးမှ မသောက်နဲ့။ ဘယ်ခြေ၊ ညာလက်ကို ရေလေးလောင်းပြီးတော့ သနပ်ခါးသာ လိမ်းကြည့်လိုက်။ ပြန်ပြီး တိုင်းကြည့်လိုက်ပါ။
ဒါက ဆရာကြီးတို့ စာအတွေ့ကြုံရော၊ ဘဝအတွေ့ကြုံရော၊ ကုထုံးအတွေ့အကြုံရော ပေါင်းစပ်ပြောနေတာလို့ တလေးတနက် ဒေါ်ထွေးကြည် နားလည်စေချင်တယ်နော်။
အခုက ဘာအကြောင်းပြောနေလဲဆို ရေအသုံးအကြောင်း ပြောနေတာနော်။ သူ့ရဲ့ အပူတွေ ငြိမ်းဖို့အတွက်ပါ။
ပြီးတော့မှ ဖြည်းဖြည်းလေးချင်း လက်ဖျား၊ တံတောင်ဆစ်၊ လက်မောင်း၊ ခြေအစွန်၊ တံတောင်ဆစ် အဲသလိုအေးအေး ဆေးဆေးနဲ့ ရေလောင်းပြီး ချိုးပေးလို့ရှိရင် ဒေါ်ထွေးကြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးဟာ ရေမှ တစ်ပါး ဆေးမရှိပါဘူးလို့ အဲဒီအပူကို လျော့ချင်ပါတယ်ဆိုရင် မေးခွန်းတစ်ခု လှမ်းမေးကြည့်ချင်တယ်။
ငယ်ငယ်က ငရုတ်သီးထောင်းလို့ မျက်စိထဲ ဝင်သွားရင် အမေ (သို့ ) အဒေါ်ရေ . . . သား/သမီး တော့ မျက်စိထဲ ငရုတ်သီးဝင်သွားပြီဆိုရင် အမေတို့၊ အဒေါ်တို့ ဘယ်ကို ရေလောင်းခိုင်းလဲ။ ခြေမကို ရေလောင်းခိုင်းတယ်။ သိပ်ကို အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။
အပူရဲ့သဘာဝက လျှောက်သွားတယ်၊ စီးသွားတယ်၊ ဟတ်သွားတယ်။ အခြေခံ ရူပဗေဒသိပ္ပံဘာသာအရ အပူတွေဟာ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို လျှောက်တယ်၊ စီးတယ်၊ ဟတ်တယ်ပေါ့။
ဥပမာ မီးပုံရှိတယ်။ ခမ်းလှမ်းလှမ်းမှာ ထိုင်နေရင်တောင် လာဟတ်နေတာ။ ရေနွေးအိုးတစ်အိုး မီးပူပေးထားရင် တည်စက ရေကို လက်ညှိးလေးထောက်ကြည့်။ လုံးဝ မပူဘူး။ တော်တော်ကြာရင် ရေက အပူစီးလာတယ်။
ဟိုး . .. ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ဆယ်ပေလောက်သံချောင်းကြီး အဖျားတစ်ဖက်ကို မီးပုံထဲ ထည့်ထားမယ်။ ကြာရင် အပူကဘယ်ရောက်လာလဲ။ ဒီဘက်ထိပ်အထိ စီးလာတယ်။ အပူစီးလာတာ။ အပူ လျှောက်လာတာ။
ကိုယ့်မှာ အရိုးတွေ ရှိတယ်။ သွေးတွေ အသားတွေ ရှိတယ်။ အရိုးတွေထဲ အပူလျှောက်လာမယ်။ သွေးတွေ သားတွေထဲ အပူစီးလာမယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ခြေထောက်ကို ရေလောင်းလိုက်ရင် အပေါ်ကပူတာ သက်သာမယ်။ ဒါအပူတွေ အောက်ကို ဆင်းတာ။ မေးခွန်းလေးက မခံမရပ်နိုင်အောင် ပူနေတာဆိုတော့ အဲဒီအပူတွေ အောက်ကို တစ်ချက်လှည့်ပေးရမှာပေါ့နော်။
ရေချိုးတာနှင့် ခေါင်းလျှော်တာအပေါ်မှာ တစ်ခုသတိထားရပါမယ်။ ခေါင်းလျှော်ပြီးမှ ဘယ်တော့မှ ရေမချိုးပါနှင့်။ ရေချိုးပြီးမှ ခေါင်းလျှော်ပါ။
နောက်တစ်ခုက ရေချိုးခါနီးလေးမှာ ခြေဖဝါးကို ဆားပွတ်ပြီးမှ ရေချိုးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဆားက ဘာလဲဆို အပူစုပ်တယ်။
ရေခဲမုန့်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင် အပြင်မှာ ဆလင်ဒါကြီးတစ်ခု ရေခဲတွေ။ အတွင်း ဆလင်ဒါကြီးတစ်ခုထဲမှာတော့ ရေခဲမုန့်တွေပေါ့။
ဆလင်ဒါဆိုတာ အိုးကြီးနှစ်ခုပေါ့။ အတွင်းဆလင်ဒါကို ကလိကလှည့်နှင့် လှည့်ပေးတဲ့အခါ စလင်ဒါနှစ်ခုကြားက ရေခဲတွေ ချက်ချင်းပျော်တာပေါ့။
ပူတာကိုး။ အဲဒီတော့ အဲဒီအပူကို စုပ်နိုင်မှ ရေခဲချက်ချင်း မပျော်မှာမို့ ရေခဲပေါ် ဆားလေးတင်လိုက်တယ်။ ရေခဲပေါ် ဆားတင်လိုက်ရင် မပျော်တော့ဘူး။ ထွက်သမျှအပူ ဆားကစုပ်ယူတာကိုး။
ရေကို တစ်နေ့ကို သာမန်ဖန်ခွက် ( ၅ ) ခွက်ကနေ ( ၇ )ခွက်လောက်ထိ သောက်မယ်။ ရေကို စနစ်တကျ ချိုးမယ်။
ရေကို ငုံမယ်ဆိုရင် အပူအကြောင်းခံပြီးဖြစ်နေတဲ့ရောဂါတွေ ပိန်းကြာရွက်တွင် ရေမတင်သကဲ့သို့ ပျောက်မှာပါလို့ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
အစာဝ၊ အနာကင်း၊ ဘယာရှင်း ကြပါစေ။Credit-ဆရာကြီးဦးရန်အောင်
အပူအစပျစာမြား စားလှနျးခွငျးနှငျ့ အစာအိမျ၊ အူလမျးကွောငျး ဝဒေနာမြား